Rova Manjakamiadana - Wikipedia
Coordinates: 18°55′25″S 47°31′56″E﻿ / ﻿18.92361111°S 47.532222222222224°E﻿ / -18.92361111; 47.532222222222224
Ny rova Manjakamiadana tamin'ny taonjato faha 19
Ireo mpanjaka rehetra nifandimby tao Analamasina dia samy nanana ny lapany avokoa izay trano kotona na trano hazo faran'izay tsotra, tsy mifankaiza amin'ny tranon'ny mponina sarababem-bahoaka manodidina. Tsy misy tavela anefa ireo trano tamin'ny andro fahagola rehetra talohan'Andrianampoinimerina ireo. Fantatsika ary fa trano efa-joro avo tafo miloloha tandron-drano izy ireo. Ny hevitry ny tandron-drano, araka ny fampianarana azo raisina avy amin'ny filazan'ireo mponina any Indonesia, tanindrazana voalohany niavian'ny firenena Merina indrindra, dia fampahatsiahivina ny tandroky ny omby natao sorona tamin'ny fandevenana sy ny fankalazana lehibe hafa toy ny Fandroana na ny Famadihana ka mampiray mivantana ny fianakaviana amin'ny fanahin'ireo razana efa nodimandry any an-koatra. Mba hahamasina ny trano noho ny fiarovan'ny razana izany no antony.
Ny malaza indrindra amin'ireo lapa na tranon'andriana tranainy tao Analamasina dia i Mahitsielafanjaka izay najoron'Andrianampoinimerina sahabo tamin'ny taona 1796 eo ho eo. Hatramin'ny andron-dRanavalona faharoa dia tao no nitahirizana an'i Manjakatsiroa izay sampim-mpanjakana nitokisan' Andrianampoinimerina fatratra, ary hatramin'izao dia mbola hita eo anolohan'ny trano ny tsangambaton'Ikodoka, mpiady maheri-fon' Andrianampoinimerina, natao hiaro ny sampy. Ny trano hafa najoron'Andrianampoinimerina dia i Besakana, eo avaratr'i Manampisoa. Io Besakana io anefa dia nanolo trano iray hafa, efa nampitondraina indrindra koa ny anarana hoe Besakana, najoron'Andrianjaka, ary araka ny lovan-tsofina dia tao no nanaovana ny soron'i Trimofoloalina mba hamerenana ny hasin' Andriamasinavalona rehefa afaka soamantsara tamin'ny fitazoman-janany an-keriny azy tany Ambohitratrimo ny mpanjaka.
Ny voalohany amin'ireo lapa azo lazaina hoe moderina dia ny Tranovola. I Radama no nampanorina azy tamin'ny taona 1820. Ilay mpandrafitra vazaha antsoina hoe Gros no nasainy nitarika ny asa fanatanterahana ary tao no nametrahan'ny mpanjaka an'i Rasalimo izay vadi-politika vahininy ka mba nampitoerany koa amin'ny karazan-trano vahiny. Tamin'ny taona 1845 anefa dia noravan'i Ranavalona io trano voalohany io ka nosoloiny an'ilay Tranovola fantatsika izay lehibe sy tsara ravaka lavitra kokoa. Ho tranon'i Rakotondradama zanany no nanorenany azy. Nisy koa fahiny trano kely moderina hafa izay rava taty aoriana teo an-kilan'ny Tranovola ary tao indrindra no namoizan'i Radama nanjaka-tapany ny aina.
Mbola ankalazana ny fahaterahan'i Rakotondradama ihany koa tamin'ny taona 1829 no nampanorenan'i Ranavalona an'i Tsarahafatra teo amin'ny faritra atsinananan'ny Rova. Io trano io izay voalaza fa tsara tarehy tokoa no nopotehin'ny baomban'ny mpanani-bohitra Frantsay tamin'ny 30 septambra 1895. Mba ho porofo mitsangana mampahatsiahy ny herin'ny mpanjanatany dia ninihina tsy naorin'ny manampahefana vaovao intsony avy eo ilay trano ka tany ngazana sisa no hany tavela.
Ny lapa lehibe sy mampitolagaga indrindra noho ny hatsarany ao Analamasina anefa dia i Manjakamiadana izay taty aoriana dia nanome mihitsy ny anarany manokana ho an'ny fitambaran'ny Rova! Mbola i Ranavalona voalohany ihany no nampanorina azy tamin'ny taona 1839 teo amin'ny toerana nisy an'i Felatanambola, trano hafa naorin'Andrianampoinimerina. I Jean Laborde izay mpanompon'ny Andriana mahalala kokoa ny teknika moderina no nasaina nitarika ny asa fanatanterahana. Toan'ny Tranovola dia lapa hazo manjakamiadana (tsara ho marihina fa fady tamin'izany fotoana izany ny manangana trano tany na vato teto Antananarivo!) ary na dia vahiny aza ny mpitarika ny fanorenana dia ny tompon-tany ihany no manapaka ny tokony ho atao sy manatanteraka an-davany sy an-tsakany ny ventin-draharaha. Tsy mahagaga ary raha toa ka mitaratra akaiky hatrany ny fiheverana momba ny fanorenan-dapa nentim-paharazana ny bikan'ny trano. Ny manodidina anefa dia nasiana lavarangana tohanan'ny andry makadiry ary ny tafo izay mahatratra 48 m ny ha-avony dia tsy mba nasiana intsony tandron-drano fa kosa noravahina voromahery lehibe natao tamin'ny halimo. Mba hampazava koa ny ao anaty Rova dia nasiana varavarana sy varavarankely marobe ny rindrina manodidina, hatrany amin'ny tafo. Ny fanamboarana an'i Manjakamiadana dia nitaky hery sy sorona marobe. Voalaza ary fa ny fitondrana an'i Volamahitsy (ilay andry lehibe nizaka ny trano tao ampovoany, izay nihoatra ny 40 m ny ha-avony ary 1 m ny savaivon'ny vodiny) hatrany amin'ny ala any atsinanana dia nitaky ny fikelezan'ainan'ny vatandahy mi-isa 5 arivo. Tamin'ny taona 1868-1873 dia norakofana rindrim-bato didinina tilikambo mafonja efa-joro i Manjakamiadana ary i James Cameron no nasaina nitarika ny raharaha. Nanomboka tamin'ny andron'i Radama faharoa mantsy dia nofoanana ilay fady mandrara ny fanorenana trano vato teto Antananarivo. Hatramin'ny andron'i Ranavalona reniny dia saiky tao Manjakamiadana avokoa no nitarihina ny fankalazana lehibe rehetra momba ny Fanjakana Merina ary koa nandraisana am-boninahitra ireo mpamangy avy any ivelany, na ny vahiny izany na ny tera-tany. Indraindray koa anefa dia ny Tranovola no nampiasaina tamin'izany.
Ny lapa lehibe farany dia i Manampisoa izay najoron'i Rasoherina eo atsimon'i Mahitsielafanjaka tamin'ny taona 1865. Ny nitarika ny asa fanatanterahana moa dia mbola i James Cameron ihany.
Ny trano lehibe hafa ao anaty Rova dia ny fiangonana izay najoron'i William Pool eo atsimon'i Besakana tamin'ny taona 1869, rehefa nivadika ho lasa kristiana i Ranavalona faharoa. Ny fiangonana dia tonga dia natao trano vato avy hatrany ary tamin'ny 8Aprily1880 no nanokanana azy.
Ireo ny trano sy lapa tao anaty Rova ka nopotehin'ny mpanasotasota ankehitriny. Tsara ho marihina koa anefa fa tamin'ny taona 1890 dia nanapa-kevitra ny hanorina lapa lehibe amin'ny biriky i Ranavalona fahatelo, izay nomeny avy hatrany ny anarana hoe "Masoandro". Noho ny fanafihan'ny Frantsay sy ny fanapotehany ny Fanjakana Merina anefa dia tsy tanteraka ny fikasana ka ny fototry ny trano sisa no hany mbola miangana ao amin'ny faritra atsimo-atsinanan'ny Rova.
Tsara ho marihina fa ivelan'ireo lapa manodidina an'i Manjakamiadana dia mbola eo koa ny lapan'i Soanierana izay nopotehin'ny Vazaha ka nosoloiny toby miaramila taty aoriana. Ankoatra an'io dia mbola eo ireo vavahady maro misy vato boribory lehibe, ary koa ny Vatomasina fisehoan'andriana teo Andohalo izay tsy nananan'ny Frantsay haja ka nopotehiny tsotra izao na dia rakitra faran'izay masina sy saro-bidy ho an'ny Merina ary vavolombelon'ny tantara aza.
(Loharano nahazoana alalana http://users.cwnet.com/zaikabe/KI/ROVA.HTM )
Antenaina hapetraka ho votoatin'ity lahatsoratra ity : http://users.cwnet.com/zaikabe/KI/ROVA.HTM
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rova_Manjakamiadana&oldid=600510"
Dernière modification le 7 Martsa 2013, à 19:32